ဒိုးနပ် လိုအစားခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာတိုင်းမ်စ် တည်ထောင်သူ ဒန်ကလေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဒိုးနပ် လိုအစားခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာတိုင်းမ်စ် တည်ထောင်သူ ဒန်ကလေ
ဒိုးနပ် လိုအစားခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာတိုင်းမ်စ် တည်ထောင်သူ ဒန်ကလေ
Posted by zaw mg on Feb 14, 2011 in Myanma News |5comments
Tag:news ဒိုးနပ် လိုအစားခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာတိုင်းမ်စ် တည်ထောင်သူ ဒန်ကလေ
မြန်မာတိုင်းမ်စ်ကို တည်ထောင်သူ ဒန်ကလေ
မြန်မာတိုင်းမ်စ်ကို တည်ထောင်သူ ဒန်ကလေ ကိုစစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းထားလိုက်တယ် လို့ ရန်ကုန်မြို့ စာပေအသိုင်းအ၀ိုင်းများက သတင်းရရှိပါတယ်။ သူဟာတချိန်က မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ ကောင်းကြောင်း တွေကို နိုင်ငံတကာမှာ ရွန်းရွန်းဝေအောင်ပြောခဲ့သူ၊ မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို သူရဲ့ သတင်းစာထဲမှာ ဝေေ၀ဆာဆာဖော်ပြခဲ့တဲ့သူပါ။ သူဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ၊ ၀ါရှင်တန်မြို့ ဂျွန်ဟော့ခ်ကင်း တက္ကသိုလ် မှာ အမေရိကန်အစိုးရ ရဲ့ နအဖ စစ်အုပ်စုပေါ်ထားရှိတဲ့ မူဝါဒတွေ ပြောင်းလဲဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ သူလည်းဖြစ်တယ်။ သူကိုယ့် သူ မြန်မာ့ အရေးကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦးလို့ သွေးနထင်ရောက် နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေထဲမှာ သူတစ်ယောက်ပါတယ်။ မြန်မာ့ အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ ခပ်ကြောင်ကြောင် မျက်နှာပြောင်တဲ့ ကောင်လို့ ပဲသတ်မှတ်ထားတယ်။ အခုတော့ မြန်မာပြည် မှာ ( Dog eat dog business) ခွေးသားစားတဲ့ ခွေးဘီလူးတွေရဲ့ အကြားမှာ ဓားစာခံဖြစ်သွားရရှာပြီ လို့ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ ဖေါ်ပြခံနေရပါတယ်။
သူ့ကို နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးလို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေအရ ကြာသပတေးနေ့က ရန်ကုန်မြို့နေအိမ်တွင် အဖမ်းခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာတိုင်း(မ်) ၀န်ထမ်းတဦးက ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ သတင်းများကဖေါ်ပြပါတယ်။သူနဲ့ နီးစပ်တဲ့ လူက တော့ ဗီဇာရဖို့ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကနေတဆင့် အမြဲလုပ်ရတယ်။ ခါတိုင်းလည်း ရက်ကျော်သွားခဲ့ဘူးတယ်။ ဘာပြဿနာမှ မရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့။ အခုမှ ဘာကြောင့် ဒီလို အဖမ်းခံ၇တာလဲဆိုတာကတော့ ဘယ်သူမှတိတိကျကျမသိသေးပါဘူး။
ကျိန်းသေတာ ကတော့ မြန်မာတိုင်းမ်စ် သတင်းစာဟာ မြန်မာပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ဆယ်စုနှစ်များစွာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ အိမ်သာသုံး သတင်းစာတွေထက်စာရင် အရည်အသွေး ကောင်းတယ်။ အဖြူအမဲမဟုတ်ဘူး၊ အရောင်အသွေးစုံတယ်။ လူထု ကို စွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မြန်မာတိုင်းမ်စ် ကို အာဏာပိုင်တွေက သဘောကျနေတယ်။
နောက်တချက်ကတော့ မြန်မာတိုင်းမ်စ် ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းပိုင်တဲ့ ရော့စ်ဒန်ကလေ တယောက် သူရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် အကျိုးတူမိတ်ဆွေ ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦးဆိုသူနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်နေတာ အတောကြာနေပါပြီ။ ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦး ဟာ မြန်မာတိုင်းမ်း ကို ကျန်တဲ့ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းပိုင်တယ်။ သူဟာ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်မှ ကြံခိုင်ရေးပါတီ အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ခဲ့သူပါ။ မြန်မာတိုင်းမ်စ် ကို ကြံ့ဖွတ် ပိုင်သတင်းစာ လုပ်ချင်နေသူလို့ မြန်မာတိုင်းမ်စ် မှာလုပ်နေသူ ၀န်ထမ်း တစ်ဦးကဆိုတယ်။ ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦး ဟာ ဘဂ္ဂဒက်ဘော့ လို့ခေါ်တဲ့ ခပ်ကြောင်ကြောင်ကောင် ကျော်ဆန်းနဲ့ နီးစပ်သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်တယ်။
တကယ်တော့ ရော့စ် ဟာ စစ်ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲဖြစ်ခဲ့သူ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်၏ အားပေးကူညီမှုဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဖြင့် ထုတ်ဝေသော မြန်မာတိုင်း(မ်) ဂျာနယ်ကို ၂ဝဝဝ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့တယ်။ သူနဲ့ အကျိုးတူ စီးပွားရေးလုပ်ခဲ့သူကတော့ လေတပ် ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်မှူးချုပ် သိန်းဆွေ၏ သား ဆန်နီဆွေပါ။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် အဖမ်းခံလိုက်ရတော့ ဆန်နီဆွေလည်း ထောင်ချခံခဲ့ရတယ်။ ရော့စ်ဟာ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်း ဗီယက်နမ်၏ ပထမဆုံး အပတ်စဉ်ထုတ် အင်္ဂလိပ်စာစောင်ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာတိုင်း(မ်)ကို တည်ထောင်ခဲ့တယ်။ ဖနွမ်းပင်ပုိ့စ် Phnom Penh Post ကို ပိုင်ဆိုင်သူလည်း ဖြစ်တယ်။ သူဟာ လူတော်တယောက်ပါ။
အခုတော့ ရော့စ်တယောက် အရှင်မဲ့သည့်ကျွန်၊ အဘမရှိ အမိမဲ့သားဘ၀၊ ပွဲထဲကလူရွှင်တော်တွေပြောသလို တခါပဲမှားမိပါတယ်။ ခိုးသား ငါးရာနဲ့ မှားခဲ့ပါတယ်လို့ ပြောမလား ဆိုတာ ကတော့ စောင့်ကြည့် ရပါအုန်းမယ်လို့ စာရေးသူတစ်ဦးက ရေးသားထားပါတယ်။
ဒန်ကလေက မလျှော့သေးပါဘူး။ အမေရိကန်အစိုးရအနနဲ့ အလျှင်အမြန် မူဝါဒပြောင်းသင့်ပါပြီတဲ့။ သူအချုပ်ထဲမှာ နေထိုင်စားသောက်ရတာညံ့လွန်းတာ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်လို့ပြောပါတယ်။
If Mr Dunkley considered himself as an expert on Burmese politics, he should have or he would have, cut his losses and quit. But it seems he hasn’t gotaclue that his days are numbered when his benefactor Khin Nyunt is gone. The same kind of treatment was given to that expatriate Chinese lady from Singapore who reformed ‘Mandalay Beer’. The regime sympathisers and ‘wailei lei people’ talk about ‘economic sanctions’ hurting ordinary people in Burma. Business people are not stupid (that’s why they do business) if there is ‘no rule of law’ no reasonable business man or woman will risk serious investment. They don’t care about human rights, they don’t care about social justice – all they care is ‘their bottom line and how much profit they could make’. After all those sins they’ve committed in making money they can always restore their public image by ‘setting up charity’ or even institutions like ‘Yale University’. Who do you think the founder of that university was?
အချက်အလက်တွေ ကျန်နေဖို့အတွက်ပါပဲ..။ အောက်မှာ .. မန္တလေးဘီယာ အမှု ရှာတင်ပေးထားပါတယ်..။
တကယ်တော့ .. ဆန်ရှင်ရဲ့ အဓီကအကြောင်းတခုက .. ဒါပါပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်..။
နိုင်ငံတိုင်း..သူ့နိုင်ငံသားနဲ့ သူ့အကျိုးစီးပွားကြည့်ကြရမှာ.. စစ်အာဏာပိုင်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့ မြန်မာပြည်တွင်းမှာက … ရင်းနှီးမြုတ်နှံဖို့ ..ဘယ်လိုမှ စိတ်မချရတာက….အဓိက အကြောင်းတခု…
The Nation: Burmese Generals Steal Fizz from Mandalay Beer
Some said she should have known better. But businesswoman Win Win Nu
thought her connection with the Burmese leaders would be solid enough to
protect her investment. But when her business began making money, the
generals showed her the door.
For the past two years, Win Win Nu has worked tirelessly to take back
what she feels was rightfully hers –ajoint-venture enterprise in what
was onceanear bankrupt Mandalay Brewery.
Her investment, with initial capital of US$6.3 million [Bt270.9
million], came to an abrupt halt in November 1998. Scores of armed
soldiers were dispatched to her home, and machine guns were positioned
all around the compound. Soon afterwards her local bank accounts were
“At the order of General Than Shwe, the soldiers with machine guns told
us to get off the property,” Win Win Nu told The Nation duringarecent
interview in Bangkok. Than Shwe is the chairman of the State Peace and
Development Council (SPDC), the highest decision-making body of Burma’s
ruling military regime.
Win Win Nu’s case is an important one. According to the agreement forged
between her Singapore-based company, Yaung Chi Oo Trading, and the
Ministry of Industry No 1 in 1993, the government would have full
control of the brewery’s books, while she would be in charge of
Win Win Nu and her husband had takena45-per-cent stake in the joint
The couple turned the brewery around within six months.
Production increased tenfold. Mandalay Beer becameabrand to be
reckoned with. Business was good. The company became the country’s
largest single taxpayer.
“They had no idea what marketing was all about,” Win Win Nu said about
the government officials who were unable to turnaprofit under their
But soon afterward, the Burmese-born businesswoman becameavictim of
her own success.
“They accused us of misappropriating funds. How could we? We didn’t have
control of the books,” she said.
With nothing to lose, she took her case to the local courts.
After fighting for 18 months, she was forced to liquidate her share in
The first team of liquidators was led byalocal tycoon, Steven Law, the
son of Lo Hsing-han,aformer Burmese opium warlord who had surrendered
to the government in return for amnesty.
Win Win Nu said she had sought help from the people she knew – including
powerful security chief Lt Gen Khin Nyunt and Foreign Minister Win Aung.
With nowhere to turn, Win Win Nu began to flip through the pages of an
Asean agreement on the protection of investments, and came across an
untested mechanism for settling such disputes.
At the moment, the Asean secretariat is looking into the matter, Rudolfo
Severino, the regional group’s secretary-general, told The Nation.
Inaletter sent to Win Win Nu’s lawyer, the office said she followed
proper procedures and channels by serving notice to the Burmese
government and providingacopy to the secretariat.
And although the Burmese government was notasignatory to the original
agreement, the letter said, the fact that Rangoon signed the protocol
when it becameafull Asean member in 1997 meant that the regime is
therefore required to abide by the agreement.
Since joining Asean, Burma’s military government has consistently been
placed under an unwanted spotlight by international media and human
United Nations agencies andanumber of Western governments have
consistently condemned the regime, which initially saw Asean asaticket
to economic growth and further integration with the world community. But
when the economic crisis struck, the investments Rangoon was hoping to
see drifted outside the region.
To help restore confidence, Asean members agreed upon an investment
promotion mission at their annual meeting in Singapore in 1999. But
until now, the outcome has not been satisfactory. And given the
political crises in the Philippines and Indonesia, Burma’s appalling
economic situation is likely to remain for some time to come.
For the time being, all eyes are on Asean.
How it handles this unprecedented case will sayagreat deal about its
seriousness in restoring business confidence.
If it fumbles, it could derail the ongoing investment-promotion drive at
a time when the region is desperately trying to show the world’s
investors that it, too, has something good to offer.
Thanks for filling in Kai. All I have in my head is was Mandalay Beer and how the woman was ripped off by the regime. I can’t remember whether it was in Far Eastern Economic Review or Asiaweek that I’ve read the article. As for Ross Dunkley, I used to read his paper The Phnom Penh Post before and someone I knew works for Myanmar Times forashort while. We will have this debate on sanctions foralong time to come. I don’t think it will end even after the sanctions are lifted (if they are lifted).
ယူအက်စ်ဆန်ရှင်လည်း… အနည်းဆုံး.. ၂ကြိမ်တော့ ..ထပ်လုပ်ဦးမှာပဲ.. ၂နှစ်ပေါ့..။
ဆန်ရှင်မရှိလို့ ..၀င်မြုတ်နှံရင်းနှီးလာတဲ့..ယူအက်စ်ကုမ္ပဏီကြီးသာ ရောင်ခြည်ဦး( Mandalay Beer)လိုအလုပ်ခံရရင် ..စစ်ရေးအရအရေးယူတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်..။
ဒါကို .. ဗျူဟာကျကျစဉ်းစားတတ်တဲ့.. မြန်မာ့တပ်မတော်က မသိမဟုတ်.. သေသေချာချာ သိလောက်တယ်..။
စကားမစပ်.. ဒန်ကလေလည်း ..မကြာခင်ပြန်လွတ်မှာပါပဲ..။
အလွန်ဆုံးပြည်နှင်ဒဏ်ပေါ့..။ ထောင်အကြာကြီး မချထားရဲပါဘူး..။ ၀ိကီလိခ်က အာဆန်နဲ့ အချိပ်အဆက်ရှိတယ် တွေ့ရင်သာ .. တမျိုးဖြစ်ကုန်မှာ…။